Garoowe : Madaxweynaha puntland oo khudbad ka jeediyey Munsabadda Xuska Asaaskii Dowladda puntland (Sawirro ).
Munasabada xuska asaaskii dowladda puntland oo ku beegan 01 Aug 2012 ayaa xaflad balaran lagu xusay Magaalada Garoowe ee xarunta Dowladda puntland,waxaana kasoo qaybgalay Golayaasha dowladda oo uu hogaaminayo madaxweyne Faroole,hay,adaha kale ee dowladda,Hay,ado Caalami ah iyo kuwo maxali ah
Madaxda dowladda ayaa Xafladda kaga soo qaybgalay iyadoo ay lug kaga soo baxeen aqalka madaxtooyadda ayna ku yimadeen halka xuska lagu qabtay ee Barxadda wayn ee Magaaladda Garoowe,waxaana halkaas kusoo dhaweyey kumanaan dadweyne ah oo tubnaa wadada hareereheeda, lulayey Calamada Soomaaliya,Puntland iyo Caleemo oyan ,kuwasoo ku qaylinayey erayo ay ka mid ahayeen " Soo dhawada madaxdii dalkoow,noolaada iyo kuwo la mid ah.
Munasabadda xuska ayaa waxaa socod dheer lagu maray wadada dheer ee isku xirta magaaladda ,waxaana socdaalka maray Ciidamadda Darawiishta,Asluubta,Badda,Baanbayda,Shaqaalaha dowladda,Ardayda,xoogsatada,Haweenka,Dhalinyarada aasha iyoCiyaartowga ,Fardoolayda,Motawadayaasha iyo dhamaan qaybaha bulshada kala duwan.
Madaxweynaha puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa hadal ka jeediyey munasabadda waxaana uu ugu horayn u mahadceliyey qaybaha bulshada puntland sida diiran ee ay ugu dabaaldegeen maalintan oo qiimo badan ugu fadhida dadka puntlan,isla markaana waxaa uu alle uga baryey in sanadka sanadkiisa kale ay ku garaan barwaaqo,baraare iyo Nabadgelyo..
Madaxweynuhu waxaa uu sheegay in puntland qayb ka tahay dowlad Federal oo soomaaliyeed oo lagu wado in la ansixiyo Dastuurka Dowladda soomaaliya oo shirkiisu ka socdo magaaladda Muqdisho,sidaa awgeed munasbadan waxaa ay ciidanka puntland ku matalayaan kuwii qaranka soomaaliyeed.
Madaxweyne Faroole ayaa shacabka puntland ugu baaqay in ay adkaystaan nabadda iyo sharafta ay haystaan iyadoo ay meel uga soo wada jeensanayaan gacana isaga qabanayaan cidkasta oo isku dayda majaxaabinta bulshada iyo dowlada puntland.
Munasabadda oo kusoo aaday xilli lagu jiro bishii ramadaan ee barakaysnayd ayaa khudbadda munasabadda ee Madaxweynaha laga dhigay qaybta labaad ee xuska oo lagu wado in la qabto caawa ayna ka dhacdo aqalka madaxtooyadda dowladda puntland ee Garoowe.
Xafladda ayaa ahayd mid kusoo dhamatay jahi degan oo nabadeed iyadoo ciidamadda amaankuna ay si wayn u sugeen Nabadgelyadda goobta iyo guud ahaan magaaladda Garoowe.
Dastuurka Cusub Soomaaliya Oo Maanta La Meel Marinayo
Iyadoo maalmihii dambe Muqdisho uu ka socday shirka ergada ansixinta Dastuurka islamarkaana ergada guddi guddi ay uga doodayeen qodobada ku qoran Dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu wadaa in la ansixiyo Dastuurkaasi.
Wasiirka Dastuurka iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda KMG ah ee Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil ayaa shaaca ka qaaday in maanta la ansixin doono dastuurka cusub.
Shalay ayaa waxaa soo dhamaaday qorshe ay ergadu kusoo gudbinayeen qodobada dastuurka oo ay kasoo doodeen muddo 7-beri ah, maantana waxaa lagu wadaa in qalinka lagu duugo dastuurka cusub, iyadoo maalinta berri ee Khamiistana ay dhici doonto munaasabaddii lagu soo bandhigi lahaa dastuurka cusub.
Dhanka kale qaar kamid ah ergada ansixinta dastuurka ee ku shiraysa Muqdisho ayaa soo dhaweeyay ansixinta dastuurka cusub, waxayna sheegeen inay ku qanacsan yihiin qaabka ay iminka wax u socdaan.
Haddii maanta la ansixiyo dastuurka cusub waa talaabo tilmaamaysa in Dowladda ay ku guulaystay meel marin mid kamid ah qodobada ugu adag ee geedi socodka nabadda Soomaaliya.
Munaasibad Xadhiga Lagaga Jaray Xarun Caafimaad Oo Dhacday Degmada Ceegaag (Daawo+Video)
Munaasibadan oo xadhiga lagaga jarayey xarunta caafimaad ee MCH ka Degmada Ceegaag ayaa ka dhacday isla degmadaasi, waxaana munaasibadani kasoo qayba galay Waxgarad, Culuma awdiin, Ururada Bulshada, Haween, Dhalinyaro, Iyo marti sharaf kale oo aad u tira badan.
Hadaba muuqaalka munaasibadaasi Halkan ka daawo.......
Shir Balaadhan Oo Lagaga Hadlayey Sidii Maamul Degmo Looga Hirgalin Lahaa Degmada Boocame Oo Ka Dhacay Xafiiska Ururka Dhalinyarada Ee Khaatumo Daryeel Boocame (Sawiro)
Shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Degmada Boocame ayaa maanta ka dhacay xafiiska Ururka Dhalinyarada ee Khaatumo Daryeel Dalka iyo Dadka ee degmada boocame.
Shirkan oo ula jeedkiisu ahaa sidii Degmada loogu samayn lahaa Maamulka Degmada kaas oo qayb ka noqon doona Horumarinta iyo Dhaq Dhaqaajinta Hawlaha Maamulka Khaatumo State ee Degmada Boocame ayaa waxaa lagaga hadlay sidii loogu dadaalihaa in laga hirgalo Degmadaasi Maamul rasmi ah, kaas oo ururin doona cashuurta kasoo xaroota Degmada Boocame.
Shirkan oo ay ka hadleen waxgarad iyo aqoon yaho kasoo jeeda Degmada Boocame ayaa ku qoto dheeraaday muhiimada ay leedahay in Maamul rasmi ah laga hirgalayo Degmadaasi kaas oo hoostaga Maamulka Khaatumo State, waxaa shirkani lagu soo qaaday in muhiimad gaar ah lasiiyo Maamulka Khaatumo isla markaana laga saacido dhanka Baahinta Maamulka iyo soo xaraynta dakhliga cashuuraha.
Hadaba shirkani ayaa waxa uu kusoo dhamaaday jawi dagan, iyadoona dhinacyadii kasoo qayb galay la isla garteen in Maamulka Degmada sida ugu dhakhsaha badan laga fuliyo Degmadaasi.
Xoog Hoose:- Madaxda Dowladda Iyo Saxiixayaasha Road Map-ka Oo Looga Yeedhay Magaalada Nairobi
Xubnaha sar sare ee Dowladda KMG iyo saxiixayaasha Road Map-ka ayaa looga yeedhay Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaana la sheegay inuu u yeedhay safiirka Maraykanka u qaabilsan arimaha Soomaaliya ee fadhigiisu yahay dalka Kenya.
Warar ku dhow dhowr safiirka ayaa sheegaya inuu si isku mid ah ugu yeedhay mas’uuliyiinta sar sare ee Dowladda KMG Soomaaliya iyo saxiixayaasha Road Map-ka, kuwaas oo sida la sheegay lagala hadi doono dhamaynta xilliga KMG in 20-ka bisha August aysan ka dabamarin ayna soo afjaraan xilliga KMG ee ay hadda ku shaqayso Dowladdad KMG Soomaaliya. Sida wararku sheegayaan Madaxda Dowladda KMG iyo Saxiixayaasha Road Map-ka ayaa kula kulmaya Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya xoghayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Hillary Clinton oo aan la faah faahin waxyaabaha ay sida tooska ah ugala hadlayso.
In kastoo loo malaynayo inay kala hadlayso dhamaynta xilliga KMG ee hadda lagu shaqeeyo iyo sidii loo dhamayn lahaa xilligii loogu talagalay oo ah 20-ka bisha August ee soo socota. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in xubnaha sar sare ee Dowladda KMG ayaa ka ambabaxaya 3-da bisha August Magaalada Muqdisho, iyagoona xubnaha kale ee saxiixayaasha Road Map-ka ay kaga biiri doonaan Magaalada Nairobi oo ay qaarkood hadda joogaan, halka qaar kalena ay ku sugan yihiin gobolada dalka Soomaaliya.
Hadaba ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in kulankii ugu dambeeyey ee saxiixayaashu ay yeeshaan ay la yeelan doonaan xubno kale oo ka tirsan beesha caalamka oo fadhigoodu yahay Magaalada Nairobi, iyadoona laga yaabo in wax badan laga badalo siyaasada dalka iyo hab raaca Roadka Mapka.
Kulanka ay la yeelanayaan xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Hillary Clinton ayaa laga cabsi qabaa inuu saamayn ku yeesho warbixin maanta ay Gollaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ka soo saareen musuq maasuqa hadheeyey madaxda sare ee Dowladda KMG Soomaaliya oo ay kooxda la socodka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya ka gudbiyeen warbixin ka hadlaysay sida loogu xad gudbay dhaqaalaha Soomaaliya, isla markaasna madaxda Dowladda KMG wixii ay doonaan ay ka sameeyaan dhaqaalaha loogu tala galay Dalka Soomaaliya.
La Yaab:- Dood Dhexmartay Xildhibaan Iyo Siyaasi Reer Jordan Ah Oo Gaadhay Heer Aan Caadi ahayn (Daawo)
Doodan oo ka socotay Telefishin isla markaasna ahayd mid toos ah Live loo daawanayey ayaa qarka u istaagtay in dhiig ku qubto oo rasaas ka bilaabmato, ka dib markii laba siyaasi oo doodaasi ka qayb galayey ay sheekadu ka xumaatay ayna gaadhay gacan ka hadal dhexmara oo waliba ay dhacday in Baastoolado la isula soo baxo.
Doodan ayaa ka socotay Telefishin fadhigiisu yahay wadanka Jordan oo lagu magacaabo Jo Sat, iyadoona dhexmartay xildhibaan Mohammad Shawabka & Siyaasi Mansour Sayf al-Din Murad waxa ayna ka doodayeen xaaladaha siyaasadeed iyo qaska dagaal ee ka aloosan wadanka Suuriya.
Balse dooda oo qadhaadhaatay ayaa waxa ay keentey in aflagaado iyo cay toos la isu jeediyo isla markaana waxay ugu dambeyntii gaadhay in xildhibaan Mohammad Shawabka uu Baastoolad iska soo jaro, uuna ugu hanjabo in ninkii uu la dooday indhihiisu inay cirka eedi doonaan oo xabaalaha loo qaadi doono.
Xildhibaan Mohammad Shawabka ayaa kab ku tuuray siyaasi Murad ka hor intii aanay sheekadu gaadhin heerkani, waxaase xildhibaanku uu furka ka qaaday oo uu cadhooday kadib markii Murad uu kasoo yaadhay hadal ahaa in xildhibaanku uu yahay basaas ka tirsan sirdoonka Syria oo uu la shaqeeyo Madaxweynaha Syria Bashaar Al-Asad.
Murad waxaa kale oo uu ku eedeeyey xildhibaan Shawabka inuu kamid yahay sirdoonka Yuhuuda ee Mosad arintaasi oo keentey in xildhibaanku uu aad uga cadhoodo oo uu baastoolada iska soo jaro.
Wariye Mohammed Habashneh oo isagu ahaa qaybiyihii dooda ayaa dhexda u xidhay sidii labadan nin xaaladooda loo qaboojin lahaa oo rasaas aanay uga bilaaban gudaha Istuudiyaha, isla markaana mayd ama dhaawac goobta aan laga qaadin isagoo xakamayn ugu dhaqaaqay labada siyaasi ee xaajadu ka murugtay.
Hadaba qisadani ayaa la yaab ku noqotay Dad badan oo caalamka ku nool, iyagoona qaarkood ay afkaaro kala duwan ka bixiyey arintani..
Halkan Ka Daawo......
Diyaariye:- Abdirahman Wadani
Muwaadin Maraykan Ah Oo Racfaan Ka Qaatay Xukun Ay Ku Riday Maxkamad Ku Taal Gobolka Chicago Ee Dalka Maraykanka
Muwaadin Marayakan ah oo lagu Magacaabo Shaker Masri ayaa racfaan ka qaatay xukun maxkamad ku taala Gobolka Chicago ee dalka Maraykanka ay damacsaneyd inay ku xukunto 15 sano oo xabsi ah.
Shaker Masri oo 28 jir ayaa qirtay in xilligii la qabtay oo ahayd 2010ka uu damacsanaa inuu soo aado dalka Soomaaliya, islamarkaana uu ku biiro Ururka Al shabaab balse waxa uu sheegay inuu baadi goob ugu jiray dhaqaalo uu ku aado dalka Soomaaliya.
Muwaadinkan ayaa sidoo kale sheegay inuu xidhiidh la lahaa qaar kamid ah saaxiibadiis oo ku sugan koonfurta dalka Soomaaliya, kuwaas oo ka bar bar dagaalamayey Ururka Al-shabaab.
Maxkamadan ayaa muwaadinkan maraykanka ah u qorshanaysay inay ku xukunto ilaa 15 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaadhaya $250,000, waxa uuna muwaadinkani dalbaday in laga khafiifiyo xukunka lagana daayo ganaaxa sida uu ku qoray warqadii racfaanka ahayd ee uu u diray maxkamadda.
Hellery Clinton Oo Booqasho Ku Maraysa Afrika Kana Digtay Khatarta Kooxaha Islaamiyiinta Ah
Xoghaya arimaha diba ee Dalka Maraykanka Mrs Hellery Clinton ayaa booqasho qaaadan doonta ilaa 11-maalmood ku maraysa qaar kamida wadamada qaarada Afrika, Mrs Hellery Clinton ayaa ka digtay halista islaamiyiinta Soomaaliya oo ay sheegtay in ay khatar ku yihiin wadamada Afrika. Clinton oo haatan lugteedii koowaad ee safarkeeda ku joogta wadanka Senegal ayaa la filayaa in ay u duusho wadanka Koonfur Afrika, sidoo kalena waxaa la rajaynayaa in ay safarkeeda ku tagi doonta wadamada, Koonfurta Suudaan, Kenya, Uganda, iyo Mawali.
Clinton ayaa diirada ku saaraysa booqashadeedan ay ku marayso qaarada afrika kooxaha Islaamiyiinta ee kasoo ifbaxay waayahii u danbaysay qaarada Afrika, iyadoona carabka ku dhufatay in wadamada Soomaaliya iyo Maali oo ay sheegtay inay kasoo socoto khatar weyn oo wada saamayn doonta qaarada oo dhan hadii aan si isku mid ah looga hortagin.
Wasiirka arimaha dibada ee dalka Maraykanka ayaa cambaaraysay doorka wadanka Shiinaha ee qaarada afrika, waxayna sheegtay in maalgalinta Shiinuhu kawado Afrika ay ka faa’iidaystaan kooxo xagjir ah oo ku sugan qaarada Afrika kuna fuliya lacagahaasi falal amaan daro.
Hadaba booqashani ayaa noqonaysa tii ugu horaysay ee Clinton ay ku timaado wadamada afrika, iyadoona laga yaabo in ay maraykanku uu qorshanayo sidii weerar baahsan uu ugu qaadi lahaa xoogaha xaq jirka ee ka jira dalalka afrika.
Taliyaha Booliska Somaliland oo sheegay in tuug badan oo dadweynaha khatar ku hayey ay xabsiga u taxaabeen
Taliyaha Booliska Somaliland Jen: Cabdillaahi Fadal Iimaan ayaa sheegay in hawlgal balaaran oo ciidanka Boolisku ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ay kusoo qabqabteen illaa kontomeeyo tuug kuwaasoo maalmihii u dambeeyey falal tuuganimo ah kula kacayey dadweynaha.
Taliyaha ayaa sheegay in hawlgalkan lagu qabqabanayey Tuugta ay ahayd mid lagu xoojinayey amaanka guud ahaan dalka iyo dadweynaha, kuwaas oo maalmahan dhibaato weyn ku hayey dadweynaha caasimadda ku dhaqan.
Taliyaha booliska oo maanta warbaahinta kula hadlayey xafiskiisa ayaa sheegay inay dadweynuhu aad uga cawdeen tuug dhibaato ku haysa dadka, waxaanu xusay in dhamaan gobolada iyo degmooyinka hawl-galo sidan oo kale ahi ka socdaan, isla markaana lagu bartilmaamaysanayey tuugtaas dadka dhibayey, amnigana khalkhalgalinaya, waxaanu sheegay in 34 ka mid ah tuugtaas maxkamadda la horgeeyey loona gudbiyey xabsiyadda dalka.
Dadweynaha Somaliland ayaa maalmihii u dambeeyey Tuug badan oo xoog dadka wax kaga qaadayey ku soo bateen magaaladda Hargeysa, kuwaas oo shacabku cabasho weyn usoo jeediyey in ciidanka boolisku wax ka qabtaan, waxaanay talaabadani tahay mid wax lagaga qabanayo tuugtan bisha Ramadaan khatarta ku haya dadweynaha.
Dhinaca kale, Taliyaha Boolisku waxa uu gaadiidleyda, gaar ahaan Basaska Qaadda Ardayda usoo jeediyey digniin ah in marka ay ardayda iskuuladda tagay sidaan aanay xawaare sare ku socon, kuwaas oo marar badan halis galiyey arday aad u yar yar oo Basasku qaadaan, waxaanu sheegay in Baskii xawaare sare ku socda la qaban doono, sharcigana la hor geeni doonno.
Sidoo kale, waxa shalay 365 askari oo ka tirsan ciidanka Booliska oo muddo afar bilood baranayey shuruucda iyo tobabarka ciidanka loogu soo xidhay xarunta tobabarka ciidanka booliska ee Mandheera, waxaana xafladaasi ka qaybgalay, madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylci, Taliyaha ciidanka booliska iyo dhawr wasiir.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa bogaadiyey ciidankan tobabarkan dhamaystay, waxaanu ku booriyey inay dadkooda iyo dalkoodda u shaqeeyaan, iskana ilaaliyaan inay wax laaluush ah qaataan, cadaaladdana ilaaliyaan.
Madaxweynaha maamulka Galmudug, Col. Maxamed Axmed Caalin oo ku sugan magaalada Nairobi oo dhawaan wadnaha looga qalay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo shirka ansixinta dastuurka ee Muqdisho ka socda, isagoo ka digay doorashooyin madaxweyne oo ka dhaca Galmudug.
Col. Caalin oo u warramayay VOA-da ayaa sheegay in ergadii shirka uga qaybgeli lahayd shirka ansixinta dastuurka ee Muqdisho ka socda ay mar hore direen, isagoo xusay inaysan iyagu doonayn inay horistaagaan horumar ay Soomaaliya gaarto.
"Waxaan maqlay inay laba doorasho ka kala dhacayso Galmudug, balse waxaan ka digi lahaa in la qabto doorashooyinkaas, waxaana ku talinayaa in loo hogaansamo rabitaanka shacabka oo laga leexdo in qori iyo hunguri wax lagu noqdo," ayuu yiri Col. Caalin.
Madaxweynaha Galmudug wuxuu sheegay inaysan jirin xilli cayiman oo uu isagu u qabtay inay doorashooyinka madaxnimo dhacaan, isagoo xusay inuu doonayay in la qabto kulan ay kasoo baxaan wax la isku raacsan yahay.
"Anigu weli ma oran maalin heblo ayay doorashadu dhacaysaa, waxaana diidanaa inuu isku dhac yimaado, waxaana jeclahay in la isla fariisto oo wax la isla gaaro, ma doonayo inaan wax ku darsado dhibaatada socota, ciddii howsha wadda ayaana qaadaysa mas'uuliyada wixii ka dhasha," ayuu yiri madaxweynaha Galmudug.
Sidoo kale, madaxweynaha Galmudug wuxuu sheegay in doorasho la qabto inay ka wanaagsan tahay in marka hore wax la iska weydiiyo waxyaabihii ay Galmudug ka dhaqaaqi waday, si go'aan mideysan loo qaato. Isagoo ugu baaqay Jen. Cabdi Qaybdiid oo ka mid ah xubnaha doorashada u tartamaya inuu ogolaado in lawada fariisto wixii shacabku doonayaanna la isku raaco.
"Haddii ay aniga i leeyihiin noo tanaasul, waxaana u sheegayaa anigu haddaba kuma jiro orod iyo dadaal doorasho," ayuu yiri Col. Caalin oo sheegay inuu aad u wanaagsan yahay caafimaad kaddib qalliin looga sameeyay wadnaha uuna sugayo baaris, balse ma sheegin halka uu aadayo markii baaristu u dhammaato.
Wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in maalinta berri ah lagu wado inay ka dhacdo Koonfurta magaalada Gaalkacyo oo ay Galmudug ka taliso doorashooyin madaxweynnimo, taasoo ay ku tartamayaan lix murashax oo mid walba uu doonayo inuu xilka isagu qabto.
Haweenka oo isaga baxay Shirka Ansixinta Dastuurka
Haweenki ka qeybgalayey shirweynaha lagu ansixinayo dastuurka Soomaaliya ayaa maanta isaga baxay fadhiga kadib marki ay sheegeen in la dhageysan waayey cabashadooda.
Haweenkan oo door ku lahaa maalmahan oo dhan ka qeybgalka shirka oo ka socda magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ogaadeen in ay weyn doonaan tiradi loo qoondeeyey ee aheyd %30 xildhibaanada baarlamaanka.
Arintaan ayey ku macneeyeen in beelaha Soomaalida ay intooda badan soo xusheen mudanayaal rag ah taasi oo daaqa ka saareyso in haweenka ay helaan kuraastooda.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa haatan ka socda xarunta shirka kulan gaar ah oo ay haweenka la leeyihiin wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska Dowlada KMG Soomaaliya Maryan Aweys.
Arintaan ayaa hadii aanan la xalin saameyn ku yeelan karta habsami u socodka shirka lagu ansixinayo dastuurka oo lagu wado in maalinta Khamiista ah lasoo gaba gabeeyo.
War Deg Deg ah:Ra,iisul wasaarihii Ethopia Meles Zenawi oo dhintay siday ay sheegeen idaacdaha ku hadlo afka dowla
War hada soo dhacay ayaa sheegay in uu dhintay Ra,iisul wasaarihii Ethopia Meles Zenawi oo dadiisa aheed 57 sano xili la sheegay in muda uu xanuunsanaa iyadoona caawa adis ababa ay tahay goob la tiiraayadeeysan geeradii masuulkaasi
Geeradi abraha qariniga cusub ayaa la qarinaayey sida Alan sharoon oo wali la sheegin geeridiisa lakiin dhintay muda ka hor
Halkaan ka daalaco warka cadeenta dhimashada melez
Dhanka kale Dhimashada Ra,iisul wasaarihii Ethopia Meles Zenawi ayaa soo dhaweyay Soomaali badan oo dhib iyo xasuuq ku haayey tanina waxay meesha ka saree in Soomaliya hesho nabad iyo kala danbeen madaama uu ahaa shaqsiga sida weyn uga haayey faragalinta tooska ah Ee Siyaasadda Soomaaliya.
Ugu Danbayntii Jaraa,idka iyo idaacadaha ku hadla afka Dowlada ayaa sheegay warkaan dhimashada Meles Zenawi iyadoona maal mahaan muran la geeliyey dhimashadiisa
Xukuumada KMG Soomaaliya oo ku baaqday in laga wada shaqeeyo Nabadda dalka
R/wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay ummada Soomaliyeed inay ka wada shaqeeyaan soo celinta nabbada Dalka Soomaaliya.
R/wasaaraha wuxuu sheegay in sanado badan dhibaatooyin colaado ah ay ka jireen Dalka Soomaaliyaa ,laakiin iminka cagta la saaray wadada nabbada Dalka Soomaaliya,loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabad galyada.
Sidoo kale Gaas ayaa sheegay in horumar laga gaaray arimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo ganacsiga ,wuxuuna sheegay in lasii adkeeynayo.
Dhanka kale C/Wali Maxamed Cali Gaas ayaa cadeeyay in horumar iyo nabad galyo lagu gaari karo in ummada Soomaaliyeed ay ku dadaalaan waxbarashada.
Wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ka shaqeynta sidii ubadkooda ay wax u bari lahaayeen si dalka horumar uu ugu talaabsado.
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay inay ku dadaali doonto soo celinta nabad galyada.
Maamulka Degmada Baydhabo Oo Ka Hadlay Dilkii Saaka Loo Gaystay Marxuun Taksiile Ah Sheegayna Inay Gacanta Ku Dhigeen Cidii Gaysatay Falkaasi (Dhagayso
Kadib markii saaka waaberigii hore ay kooxo ku hubaysan baastoolado ay ku dhex toogteen gudaha Magaalada Baydhabo nin taksiile ah ayaa sida la sheegay kooxihii falkaasi gaystay waxa ay iskaga carareen goobtii ay falkaasi ka gaysteen.
Gudoomiyaha Degmada Baydhabo ee Dowladda KMG Soomaaliya Mudane Xasan Macalin Axmed Biikolo ayaa noo xaqiijiyey in ay gacanta kusoo dhigeen cidii falkaasi gaysatay.
Haba si aanu faah faahin dheeraad ah uga helno arintaasi ayaa waxaanu waraysi qoto dheer la yeelanay Gudoomiyaha Degmada Baydhabo ee Dowladda KMG Soomaaliya Mudane Xasan Macalin Axmed Biikolo waraysigaasina waxa uu u dhacay sidatana.
Qaar Kamid Ah Haweenka Soomaaliyeed Ee Ku Midaysan Ururka Dugsi Oo Deeq Raashin Ah Soo Gaadhsiiyey Dadka Dan Yarta Ah Ee Ku Dhaqan Magaalada Buuhoodle (Sawiro)
Qaar kamid ah Haweenka soomaaliyeed ee ku midaysan Ururka Dugsi ee Dalka Holland ayaa deeq raashin ah soo gaadhsiiyey dadka dan yarta ah ee ku dhaqan Magaalada Buuhoodle ee xarunta Gobolka Cayn.
Deeqdan raashinka ah oo iskugu jirtay Bariis, Bur, iyo Saliid ayaa waxaa ururka Dugsi u soo wakiishay Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax oo kamid ah culuma awdiinta Magaalada Buuhoodle, isagoona ugu horeynba ka warbixiyey Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax cida soo dirtay deeqdani iyo cadadka ay le'eg tahay.
Sheekh Mukhtaar ayaa sidoo kale xusay in deeqdani ay soo direen Ururka Dugsi oo ay Gudoomiye ka tahay Sahra Diiriye Gamaadiid, isagoona sheegay in deeqdani loo soo gaadhsiiyey lacag ahaan taas oo cadadkeedu dhamaa 1250 Dollar, isla mar ahaan taana ay qoysaskan da yarta ah oo ay tiradoodu dhan tahay ilaa 30 qoys ay raashin ugu gadee lacagtaasi.
Sidoo kale waxaa iyana halkaasi ka hadashay hooyo kamid ah qoysaskii deeqdani lasoo gaadhsiiyey, iyadoona uga mahad celisay Ururka Dugsi ee deeqdani soo gaadhsiiyey.
Ma aha markii ugu horaysay ee deeq noocan oo kale ah uu Ururka Dugsi soo gaadhsiiyo dadka dan yarta ee ah ee ku dhaqan Deegaanada Sool, Sanaag, iyo Cayn.
Wariye:- Abdirahman Wadani
Mareykanka oo la sheegay inuu hogaaminayo howlgalada AMISOM ee Soomaaliya
Maqaal lagu qoray jariirada Lose Angles Times ee kasoo baxda wadanka Mareykanka ayaa lagu soo bandhigay macluumaad badan oo ku aadan doorka Mareykanku kuleeyahay wadanka Soomaaliya.
Major jen. David Hogg oo kamida saraakiisha ugu sareysa ciidamada wadanka Mareykanka oo qudbad ujeedinayey askar ka tirsan hawl galka AMISOM oo tababar loogu soo gabagabeeyey Magaalada Freetown ee caasimada wadanka Siiraliyoon ayaa yiri” waxaan idinka doonaya inaan aragno Somalia oo ka xorowda maamul xumada musuqmaasuqa iyo argagixisada, waan ogahay inaad diyaar u tihiin ayuu hadalkiisa kusii daray”
Waxaana sidoo kale goobtaasi ka hadlay taliyaha hawlgalada ciidamada Siiralyoon Brig. Jen kamba mondeh Mareykanku si weyn ayuu inoo gacan siiyey waan uga mahadcelineynaa taageeradooda hagar la,aaneed, dhanka kale isagoo la hadlayey askarta uu taliyaha u yahay ayuu ku yiri” kani waa dagaal khatar ah waxaase hubaal ah in qaar kamida meydadkiina dib loogu soo celin doono Siiralyoon.
Mareykanka ayaa AMISOM ka taageera tababarida ciidankooda hub, diyaaradaha drones, daawiiyin iyo jaakadaha rasaasta la iskaga difaaco Mareykanka, ayaan door muuqda ku lahayn siyaasada wadanka Soomaaliya tan iyo sanadkii 1993 oo uu ku fashilmay hawlgalkii raja soo celinta Soomaaliya ee UNISOM oo uu hogaaminayey Mareykanku kadib markii ay fooda is dareen dagaal yahano daacad u ahaa JEN Caydiid, dagaalkaas oo Mareykanka dhaxalsiiyey fadeexo balaaran kadib markii 18 askari looga dilay magaalada muqdisho markaasoo dad careysani ay meydadkii Mareykanka dhulka ku jiideen waxaana sidoo kale laga soo riday laba diyaaradood oo nooca BLACH HAWK DOWN ah.
Mareykanka ayaa sidoo kales ku fashilmay sanadkii 2006 tageero uu siinayey ciidamada itoobiya oo maalma kooban ku qabsaday wadanka soomaaliya u jeedadooduna ahayd iney meesha kasaaraan xoogagii maxaakiimta islaama oo haysta inta badan wadanka Somalia hasa yeeshee sadex sano kadib itoobayaa ayaa soomaalia ka baxday iyadoon ka gun gaarin hadafkii ay u soo gashay oo ahaa iney cagta mariso islaamiyiintii hubeysnaaa oo kusii xoogeystay soo galidii itoobiyaanka.
Warbixinta wargeyka lose angels oo soo xiganeysa masuuliyiin mareykan ah ayaa sheegaysa in amarada dagaal galinta amisom ay leeyihiin saraakiisha ameerikaana waxana warbixinta ku xusan inaan inta badan fagaarayaasha lagu arag hase yeeshee ay si hoose u shaqeeyaan.